IiJenali-Umbutho wamaZiko aBhalayo eHlabathi
IWCA likhaya lombutho kwiijenali ezimbini zeziko lokubhala: Ijenali yeZiko lokuBhala kwaye Ukujongwa kwakhona koontanga.
Ijenali yeZiko lokuBhala iyeyona nkulumbuso yophando kweziko lokubhala ukusukela ngo-1980. Ijenali leyo ipapashwa kabini ngonyaka.
Umyalezo ovela kubahleli bangoku, uPam Bromley, uKara Northway, uEliana Schonberg, kunye nomhleli wokuphononongwa kweencwadi uSteve Price:
Sizimisele ukupapasha uphando olomeleleyo lobugcisa kunye nezifundo zethiyori ezifanelekileyo kumaziko okubhala. Ukongeza, sifuna ukwakha indawo yophando eyomeleleyo yamaziko okubhala. Ukuza kuthi ga ngoku, sizibophelele kwizenzo ezintathu eziphambili. Siza:
· Nika ingxelo enentsingiselo kuyo yonke imibhalo-ngqangi, kubandakanya nezo sikhetha ukuzala.
Sizenze sifumaneke kwaye sifikeleleke kwiinkomfa zengingqi kunye nezamazwe ngamazwe zokubhala.
Ukulungelelanisa imicimbi yophuhliso lobungcali enxulumene Ijenali yeZiko lokuBhala kunye noluntu lwethu lophando.
Ngolwazi oluthe kratya malunga nejenali, kubandakanya nendlela yokungenisa inqaku okanye uphononongo ukuze luqwalaselwe, nceda uye ku WCJIwebsite: http://www.writingcenterjournal.org/.
WCJ ungongezwa kwi Iphakheji yobulungu be-IWCA.
WCJ ifumaneka kwisicatshulwa esipheleleyo JSTOR ukusuka ngo-1980 (1.1) ngokuya kukhutshwa kutshanje.
Ezinye iindlela zokufikelela WCJ inokufumaneka kwiwebhusayithi: http://www.writingcenterjournal.org/find/
TPR kukufikelela ngokupheleleyo kwi-intanethi, ukufikelela ngokuvulekileyo, imultimodal kunye neelwimi ezininzi zokubhaliweyo ukuze kukhuthazwe ukubhalwa kwemali ngumfundi ophumelele isidanga, isidanga sokuqala, kunye nootitshala bezikolo eziphakamileyo kunye nabasebenzisana nabo.
Uqhakamshelwano TPR: editor@thepeerreview-iwca.org
TPR kwiwebhu: http://thepeerreview-iwca.org
Ngolwazi malunga neNcwadana ye-IWCA, Uhlaziyo lwe-IWCA, tyelela Apha. Ngolwazi lolunye upapasho olujolise kwiziko lokubhala lokufunda, ndwendwela yethu Uvimbas phepha.